Gbasara anyị - Dongguan Chengda Rubber & Plastic Technology Co., Ltd.
The ụlọ ọrụ nditịm mepụta mmepụta akara na akara nke dị iche iche mmepụta Filiks dị na chọrọ nke ISO mba quality usoro. The ụlọ ọrụ nwere a mbara management usoro si ngwaahịa imewe, nnyocha na mmepe, na-akpụzi development, akụrụngwa, mmepụta technology, na mma nke àgwà nke mmepụta Filiks, zuru ezu ngwaike ụlọ ọrụ, àgwà kwụsie ike. Mgbe afọ nke mmepe, ụlọ ọrụ na ngwaahịa na-ere allover China. Ndị ọrụ ama ama ama tụkwasịrị obi nke ukwuu, ma na-ebupụ ha na United States, European Union, Southeast Asia na mba ndị ọzọ wee merie otuto site n'aka ndị ahịa.
Anyị na-anabata OEM ma ọ bụ ODM, ma na-enye nkwado ọrụ aka na ọrụ ntụkwasị obi, n'okpuru bụ ike anyị.
1. Nhazi ngwaahịa na ngwa ngwa ngwa ngwa.
2. Ebu ebu na ịkpụzi akpụzi.
3. Nhọrọ ihe na mmepe.
4. Silicone na roba mpikota onu na ịkpụzi ọgwụ.
5. Nchịkọta ngwaahịa.
6. Omenala mbukota nkwado.
Azụmahịa nkà ihe ọmụma
Iguzosi ike n'ezi ihe, nhazi, ihe ọhụrụ, ekele.
Standard ọrụ, ọkachamara na-elekwasị anya, ọhụrụ, àgwà mbụ.
Jiri ikike na-ebuli ahịa ahụ ike, jiri teknụzụ mepee ahịa, ma jiri mma nweta ndị ahịa.
AB PRROR ANYOR
Ngwaahịa dị elu + ọnụahịa asọmpi + Oge ntụgharị ọsọ ọsọ + Ọrụ Ndị Ahịa zuru oke
Inwe na-eduga mmepụta technology, agadi ahụmahụ mkpara, nwere ike dị nnọọ mma akara na mmepụta na-eri.
Elu àgwà ngwaahịa
Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ imepụta ezigbo ngwaahịa, na-ahụ na ndị ahịa anyị ga-ekerịta ahụmịhe ha dị mma ma soro anyị rụọ ọrụ. Specific asambodo: SGS, FDA, RoHs dị.
Ngwa Oge Oge
Nrụpụta ọrụ anyị arụpụtara nke ọma, yana mgbanwe nke ndị ọrụ, belatara ntụgharị ọrụ anyị, na-ahụ na nnyefe dị n'oge. Anyị na-agbakwunye ohere anyị arụpụtara nke ọma maka imepụta, ime ka usoro ịtụ ahịa dị mfe.
Ezigbo ịge ntị nke ndị ahịa anyị amaara na nzaghachi ha na azịza ha yana ajụjụ nke ndị ahịa ọhụrụ anyị enyegoro anyị aka ịmegharị ma melite ogo ọrụ. Ya mere, anyị nwere ike ịkwado mkpa ndị ahịa anyị.
Mmadụ Bịa na ileta anyị factory na onye, ​​zipu gị ase ka anyị email, ma ọ bụ na-akpọ anyị n'oge ọ bụla! Daalụ maka nlebara anya gị, nkwado, ntụkwasị obi na imekọ ihe ọnụ.